Ahoana ny fijerena ny zava-bitanao ao amin'ny Xbox, Xbox mivantana eo amin'ny mandeha
Mankanesa ao amin'ny Xbox Live sy ny zava-bitanao amin'ny mandeha
Maheno ny fonao ve ny fandrenesanao an'io "plop" mahazatra io rehefa milalao Xbox?
Nanova mandrakizay ny lalao i Microsoft - na tsara na ratsy - rehefa nampiditra ny zava-bita maro, volana maromaro lasa izay. Amin'ny maha-olona iray izay nahavita ny zava-bitany 100 isan-jato tamin'ny lalao vitsivitsy dia azoko tsara ny faniriana hahazo ireo "cheevos".
Ho an'ireo olona te-hiditra amin'ny Xbox Live na hanaraka ny zava-bitany na aiza na aiza misy azy ireo, ny fampidirana smartphones ary, amin'ny lafiny iray, ny takelaka dia nahafahana nanamarina ny zava-bitanao sy ny namanao, fa koa ny fanitsiana ny mombamomba anao ary na ny avatar anao aza. Raha mitady ny hahazo ny Xbox Live ianao ao amin'ny paosinao na ny palmieo amin'ny tànanao, dia ireto misy fomba roa ahafahana mijery azy amin'ny mandeha amin'ny fitaovana findainao.
Ny navigateur smartphone
Ny fomba iray ahafahana miditra amin'ny Xbox Live ao amin'ny smartphone na takelakao dia ny mandeha any amin'ny navigateur fotsiny ary mitsidika mivantana ny vohikala Xbox Live. Ny adiresy dia afaka miova arakaraky ny faritra hahafahanao mandroso ary ny Google ihany izany (ho an'ny gamers any Etazonia, ohatra, ny adiresy dia www.xbox.com/en-US/live/).
Raha vantany vao hita ao amin'ilay tranokala ianao, dia afaka miditra amin'ny sary eo amin'ny sehatra ambony eo amin'ny efijery misy anao miaraka amin'ny andalana telo. Nanamarina aho fa io fomba io dia mitovy ihany amin'ny fampiasanao Safari, Chrome, ny fampiharana Google ary ny mpizara Samsung any amin'ny Smartphone Galaxy S aza .
Raha vantany vao tafiditra ianao dia aforeto ity sary miafina telo ity eo amin'ny farany ambony ary hijery ny sarinao, ny anaranao ary ny Gamertag ianao. Tafio amin'io faritra ankapobeny io ianao ary hanangana karazana safidy ahafahanao miditra ao amin'ny kaontinao Microsoft, ny mombamomba anao, ny lisitry ny namana, ny hafatra ary ny famandrihana. Afaka manavotra ny code koa ianao ary manova ny fomba fiasanao Xbox.
Mba hanamarinana ny zava-bitanao dia ampidino fotsiny ny "Profil" ary dia hiteraka sary miaina vaovao miaraka amin'ny avataro ianao, ary misy tabilao eo ambony eo amboniny. Ny iray amin'ireo dia ny "Achievements", izay azonao henoina.
Ny olana iray azoko amin'ny fidirana amin'ny Xbox Live amin'ny alalan'ny tranonkala dia manondro anao amin'ny kaonty Microsoft sy Hotmail mety ho azonao atonta amin'ny tablety tranokala hafa. Noho ny fampiasako kaonty Microsoft hafa amin'ny mailaka sy ny mombamomba Xbox Live dia mety hahakivy izany.
Ny app Xbox LIVE
Raha mpilalao iPhone, iPad na Android smartphone ianao dia manandrana ny fahatsoran'ny fampiasana app amin'ny Access Xbox Live, tsara, misy ny app ho an'izany. Ny fanazavana taloha, fantatro.
Na dia nampiasa apps androany vitsivitsy aza aho tamin'ny andro, dia manana olona ofisialy antsoina hoe My Xbox LIVE i Microsoft. Ampidino fotsiny fa ao amin'ny iOS or Android fitaovana sy ianao rehetra.
Ny interface ho an'ny app dia zavatra tsotra kokoa noho ny tranonkala finday. Ny varavarankely voalohany dia mametraka anao ao amin'ny sehatra Spotlight, izay mampiseho lahatsary sasany horonan-tsary izay tian'i Microsoft hampiasainao. Hafahafa mivoatra, Microsoft ... Fa izay tena irinao dia varavarankely faharoa sy fahatelo, izay azonao atao amin'ny fidirana eo amin'ny efijery. Amin'ny lafiny iray, mamporisika ny fingadona eny amin'ny faritra fotsy aho eo an-tampony rehefa manao izany ao amin'ny sehatra fisarihana ankapobeny indraindray mahatonga anao hanokatra video (grrr!).
Ny varavarankely faharoa dia ny fizarana sosialy, izay mampiseho ny totalinao ho an'ny zava-bitanao sy ny avataro. Tsindrio ny avataro ary izany dia hiantso izay biby anananao ao anatinao na hanao fihetsehana samihafa. Ny ankavanana amin'ny avataro dia ny menus mba hahazoana namana, hafatra ary mena. Azonao atao ihany koa ny manova ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny pensilihazo pensilihazo na ny avatar anao amin'ny alàlan'ny sary famantarana ny loko ao amin'ny sakafo midina ambany.
Ny efijery fahatelo, mandritra izany, dia mitanisa ny zava-bita amin'ny lalao. Raha manana TON amin'ny lalao nilalao toy ny ataoko ianao, dia azonao ampiasaina ny lakolosy fanalehibeazana mba hitadiavana kilalao manokana.
Jason Hidalgo dia manam-pahaizana Elektronika Portable momba ny Electronics . Eny, mora mafana izy. Araho ao amin'ny Twitter izy @jasonhidalgo ary ho faly koa izy.
Ahoana no Mamorona kaonty Network PlayStation Network
Ahoana ny famitana ny lalao video nipetaka amin'ny Twitch
Lalao amin'ny vola: Lalao an-tserasera an-tserasera
Inona avy ireo lalao 'Tony Hawk's Pro Skater' mihemotra ho an'ny Xbox?
Ahoana ny famerenana ny Xbox One
Ahoana ny fandraketana sy famokarana horonantsary lalao
Fomba hampihenana volavola ao Ventrilo
Inona ny Ad-hetsika Adobe ao amin'ny PSP?
Ny Guide Windows Ultimate And Ubuntu Dual Boot Boot
Inona ny rakitra WMV?
Ampiasao ny Finder mba hahazoana ireo backups amin'ny FileVault amin'ny Time Machine
Dolby Vision Technology ho an'ny Cinema sy Home Theater
JBL Cinema 500 Home Theater Speaker System - Sary Profile
Fampitahana ireo mpanome tolotra aterineto Wi-Fi International
Ahoana ny fomba fampiasana ny ravina amin'ny Microsoft Word
Ampidino ny tsipaipaikan-tsipelina mifandraika amin'ny Mac OS X Mail
Ny fomba fiasan'ny Airbags Smart
Ahoana ny fomba fampiasana sombin-tsakafo: fantsona feno
Ahoana ny fomba hanampiana ireo kaonty maromaro amin'ny Gmail Group indray mandeha
Ny 7 Best Studio Headphones Mividy amin'ny 2018
Fampidirana ho an'ny rakitra Linux Log
Samsung sy Philips Ditch 3D TV
Ahoana ny fandefasana karazana palettes ao amin'ny Inkscape
Ahoana ny fomba hamerenana mailaka misimisy ao amin'ny Yahoo Mail
XpanD X104 3D Glasses - Review and Photo Profile